China fire blanket rụpụta na Factory | Jiashun
Fireproof blanket usoro a tumadi mere nke fireproof na-abụghị combustible eriri na esichara site pụrụ iche usoro. Ihe ndị dị mkpa: na-enweghị ike ịgbagha, nnukwu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ (550 ~ 1100 ℃), usoro kọmpat, enweghị iwe, ọdịdị dị nro na nke siri ike, dị mfe iji kechie ihe na ngwa ngwa. Igwe mkpuchi ọkụ nwere ike ichebe ihe ahụ site na ebe a na-ekpo ọkụ ma na-acha ọkụ ọkụ, ma gbochie ma ọ bụ wepu combustion kpamkpam.
Fireproof blanket usoro a tumadi mere nke fireproof na-abụghị combustible eriri na esichara site pụrụ iche usoro. Ihe ndị dị mkpa: na-enweghị ike ịgbagha, nnukwu okpomọkụ na-eguzogide ọgwụ (550 ~ 1100 ℃), usoro kọmpat, enweghị iwe, ọdịdị dị nro na nke siri ike, dị mfe iji kechie ihe na ngwa ngwa. Igwe mkpuchi ọkụ nwere ike ichebe ihe ahụ site na ebe a na-ekpo ọkụ ma na-acha ọkụ ọkụ, ma gbochie ma ọ bụ wepu combustion kpamkpam. O nwere njirimara mara mma nke 550 resistance nguzogide okpomọkụ nke eriri iko na 260 resistance nguzogide okpomọkụ nke mkpuchi silica gel,
1. Maka obere klas A mmanụ / griiz na ọkụ na-acha ọkụ
2. Enwere ike kechie ya n'isi na ahụ maka nchedo ọkụ na ọkụ na ọkụ 3 ， mgbe ị na-agbaba n'ime ụlọ ọkụ, ma ọ bụ maka nchekwa pụọ ​​na ọla awụchara
4. Faiba glaasi kpara nke nwere ihu ederede; a na-eji eriri na-acha ọkụ ọkụ mee ọnụ ọnụ ya niile
5. Ime akwa dị nso na-ebelata oke ikuku oxygen nke ikuku iji nye ọkụ
6. Ejiri na ngwa ngwa ngwa ngwa nke puru ikwusi na mgbidi ma obu tinye ya na ebe obula
7. logo nwere ike ahaziri, na Mbupu nwere ike ịbụ
Kuki ezinụlọ, ime ụlọ maka ndị agadi, ụlọ obibi ụlọ akwụkwọ, ngalaba ụlọ ọgwụ, ebe ntụrụndụ, họtel, ụlọ elu na ụlọ obibi, Yi Nlọ ndị nọọsụ, ụlọ ọdịmma ụmụaka, obodo obibi, ụlọ obibi akwụkwọ, ụlọ ahịa, caflọ ịntanetị, ụgbọ ala, ọdụ mmanụ, ụlọ arụsị , ụlọ mkpọrọ na ebe ndị ọzọ ndị mmadụ bijupụtara.
1. You bụ ụlọ ọrụ azụmaahịa ma ọ bụ nrụpụta?
Anyị bụ ndị na-emepụta kemgbe 2000.
2. Nwere ike ịnye ọrụ OEM?
3. Nwere ike izitere m ihe nlele? Ọ bụ n'efu?
Ee, ihe nlele ahụ bụ n'efu. Mana ụgwọ ozi ahụ kwesịrị ịdị n'akụkụ gị.
4. Ọnụ ego ị nyere m, nwere ike ịbụ mbelata karịa?
Ọ ga-adabere n'usoro dị ukwuu.
5. Enwere nkwa ọ bụla?
Nọmalị anyị akwụkwọ ikike oge bụ ọnwa isii. Ọ bụrụ na ọ bụ nsogbu nsogbu, anyị na-akwado a nnọchi, nkwụghachi.
6. Ofdị njem
Site n’oké osimiri, n’ikuku, site na ozi, na ụgbọ oloko.
7. Kedu ụdị ngwaahịa?
Nzaghachi ndị ahịa gosipụtara “ogo dị ezigbo mma! ”
8. Kedu maka oge nnyefe?
Nọmalị 7-30 ụbọchị mgbe na-anata n'ihu ugwo. A ga-akwadebe ihe nlele n'ime ụbọchị 1-3.
Nke gara aga: faiba glaasi ịgbado ọkụ blanket
Osote: acryli ntekwasa faiba glaasi akwa